$20M Ceter jabsaday ka liidata qaybiyay apps Ethereum
Sida laga soo xigtay shirkadda ammaanka internet Chinese Qihoo 360 Netlab, Anonymous ayaa la xaday $20 milyan oo Ceter ka liidata qaybiyay rigs macdanta Ethereum iyo codsiyada dhinac saddexaad. Khubarada ee shirkadda odhan weerarrada internetka ee bar-qanjidhada Ethereum shqsiga internetka.
shirkada macdan Crypto in la qoran London Stock Exchange
Shirkadda A cusub kuu oggolaanaysa in dadka anigaa cryptocurrencies marayo telefoonada iyo kombiyuutaro la isticmaalayo adeega Times ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku qor on Stock Exchange London, hore ee is-dhaafsiga.
Argo Blockchain ayaa sheegay in ay rajaynaysaa in ay ururiso £ 20 million in liiska iyo filayo inuu ku kacayo £ 40 million. Argo ayaa sheegay in ay noqon doonto shirkada macdan ugu horeysay crypto si ay ugu biiraan suuqa saamiyada ee London.
shirkadaha adeegyada maaliyadeed ku bixiso $ 1.7B on blockchain
The shirkadaha adeegyada maaliyadeed kharash gareeya $1.7 billion ledgerada sannad walba on qaybiyey, sida laga soo xigtay cilmibaadhaha Greenwich Associates.
Daraasaddu waxay muujinaysaa miisaaniyadda ku bixisay on blockchain kordhay 67% sanadkii la soo dhaafay, iyadoo mid ka mid ah 10 bangiyada iyo shirkadaha kale ee warbixinta kharashka ka badan $10 million. Sidoo kale, tirada shaqaalaha ka shaqeeya dadaallada blockchain Laab sanadkii la soo dhaafay.
Richard Johnson, Madaxweyne ku xigeenka ee Qaabdhismeedka Market Greenwich Associates iyo Technology ayaa sheegay in in ka badan saddex-meeloodow mashaariicda hadda ka yar tahay horumarka la filayaa in ay ku nool tagaan laba sano gudahood.
CFTC ku baaqay in la is dhaafsi crypto si ay ula wadaagaan xogta ganacsiga
Badeecadda Futures Commission Trading The US (CFTC) ayaa codsaday in dhowr is dhaafsi lacagta crypto – Bitstamp, Coinbase, itBit iyo Kraken – xogta ganacsiga sarrifka si loo ogaado in khalkhalgelinta waxaa saameeya suuqa crypto ah.
Inkasta oo baaritaanka CFTC ee weli ku jira marxalad hore, waxa uu muujinayaa in nidaamiyo dan u culus gelinaya is dhaafsi crypto ay kormeer. Khaas ahaan, CFTC ay baarayaan in suuqa waxaa saameyn ku dhaqanka ganacsiga sida buufinta ama in ganacsatada ay yihiin galo qiimaha macmal ah koror weyn oo.
bangiyada Korean qorsheyneysid inaad isticmaasho blockchain si loo xaqiijiyo aqoonsiga qofka macaamilka ee
A group bangiga qaran ee South Korea ayaa qorshaynaysa in ay hirgaliyo nidaamka xaqiijinta ID blockchain ku salaysan waayo, bangiyada ganacsiga qoyska.
Nidaamka cusub, BankSign, bixin doonaa bangiyada degaanka khiyaar ah in lagu badalo nidaamka hadda jira xaqiijinta ID in uu socdo muddo tobannaan sano ee South Korea.
Adeegga ID blockchain cusub, taas oo diyaar u noqon online iyo bangiyada mobile labada doonaa, ka dhigan mid ka mid ah dadaalka ugu horeysay by bangiyada ganacsiga ee South Korea in la sameeyo codsiyada blockchain diyaar u ah macaamiisha guud.
Report Kraken Daily Market for 11.06.2018
$212M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
Warbixinta Falanqaynta Suuqa 21.02.2018
Study waxyooday 27% ee ...
Maisel ayaa sheegay in:
Riley Doig ayaa sheegay in: